Olombelona noforonina ho voninahitr’Andriamanitra
“Koa amin’izany, na mihinana na misotro hianareo, na inona na inona ataonareo, dia ataovy ho voninahitr’andriamanitra izany rehetra izany” 1 Kôr. 10:31
Nahary ny olona ho voninahitry ny Tenany Andriamanitra, kla aorian’ny fitsapana sy fizahan-toetra, ny fianakavian’ny olombelona dia afaka ho tonga iray amin’ny fianakavian’ny lanitra. Tanjon’Andriamanitra ny hameno ny lanitra amin’ny fianakavian’ny olombelona , raha toa naneho ny tenan’izy ireo ho mpankato ny Teniny rehetra izy ireo. Tsy maintsy notsapaina i Adama, mba hahitana na hankato izy, tahaka ireo anjly mahatoky, na tsy hankato. Raha naharitra ilay fitsapana izy, ny hany torolalany ho an’ny zanany dia ny fahatokiana irery ihany. Ny fisainany sy ny eritreriny dia hanahaka ny fisainana sy ny eritreritr’Andriamanitra (...)
Nahary an’i Adama araka ny Toetrany Andriamanitra, madio sy misandratra. Tsy nisy foto-kevitry ny fahalovana tao amin’ilay Adama voalohany, tsy nisy vinavina na fironana simba ho amin’ny ratsy. Tsy nisy fahadisoana toy ireo anjely teo anoloan’ny seza fiandrianan’Andriamanitra i Adama. Tsy hay hazavaina izany zavatra izany saingy zavatra maro izay tsy takatry ny fahalalantsika ankehitriny no ho azontsika amin’ny fahafenoany rehefa hahita araka izay nahitana antsika, ary hahafantatra araka izay nahafantarana antsika.
Voasoratra momba ireo olomasina tamin’ny andro taloha fa Andriamanitra dia tsy menatra ny hatao hoe Andriamaniny (Heb. 11:16). Ny antony dia izao, raha tokony ho nitsiriritra ireo haren’ny tany na hikatsaka fahasamabarana ao amin’ny drafitra araka izao tontolo izao na faniriana izy ireo, dia napetraka ho eo ambonin’ny alitaran’Andriamanitra ny momba azy rehetra ary nampiasany izany mba hanorenana ny Fanjakany. Nivelona ho an’ny voninahitr’Andriamanitra irery ihany izy ireo ary voalza tamin’ny fomba mazava fa vahiny sy mpivahiny eto an-tany , mitady ny tany tsara kokoa, izay any an-danitra. Ny fitondran-tenan’izy ireo dia nanambara ny finoany. Afaka nanankina tamin’izy ireo ny Fahamarinany Andriamanitra ary afaka namela izao tontolo izao mba handray ny fahalalana ny sitrapony avy amin’izy ireo.
Fa ahoana kosa no mba fihazonan’ireo milaza ho vahoakan’Andriamanitra ankehitriny ny voninahitry ny Anarany? Ahoana no ahafahan’izao tontolo izao mahafantatra fa vahoaka manokana izy ireo, Inona no atolotr’izy ireo momba ny maha-olom-pirenen’ny lanitra ?
Fahadiovana amin’ny fahafenoany sy fahatsorana no tokony hanamarika ny fitoerana sy ny fitafian’izay rehetra mino ireo fahamarinana miezinezina ho amin’izao vanim-potoana izao . ny akanjontsika, ny tranontsika, ny resaka ataontsika, dia tokony hanambara ny fanokanan-tenantsika ho an’Andriamanitra. Hery manao ahoana no atafy ireo izay nahafoy ny zavatra rehetra ho an’i Kristy.